Njem Ndị Ahịa na Njikwa Njide Optimove
Otu n'ime teknụzụ na-adọrọ adọrọ, nke dị elu m hụrụ na IRCE bụ Optimove. Optimove bụ sọftụwia sitere na weebụ nke ndị ahịa ahịa na ndị ọkachamara njigide jiri zụlite azụmaahịa ha n'ịntanetị site n'aka ndị ahịa ha dị. Sọftụwia ahụ jikọtara nka nke azụmaahịa yana sayensị data iji nyere ụlọ ọrụ aka bulie njikọ aka ndị ahịa yana uru ndụ ha niile na-arụ site na ịkpaaka na-ejigide azụmaahịa na-achịkwa nke ọma. Ngwakọta teknụzụ pụrụ iche nke ngwaahịa ahụ gụnyere ịme ngosipụta ndị ahịa dị elu, nyocha ahịa ndị na-ebu amụma, ịtụkwasị ndị ahịa obi,
Ihe mgbakwunye AddShoppers na enyere gị aka ịkwalite ego mmekọrịta mmadụ na ibe ya, tinye bọtịnụ nkekọrịta ma nye gị nchịkọta etu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si emetụta azụmahịa. AddShoppers na-enyere ndị na-enye ọrụ ecommerce aka ịkwalite mgbasa ozi mmekọrịta iji nwekwuo ahịa. Mkparịta ụka ha na-ekerịta, ụgwọ ọrụ mmekọrịta, na ịzụta ihe ndị a na-emekọrịta na-enyere gị aka ị nweta mbakkọrịta mmekọrịta nke nwere ike ịbawanye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ihe nchịkọta AddShoppers na-enyere gị aka ịlaghachi nloghachi gị na ntinye ego ma ghọta nke ọwa mmekọrịta na-agbanwe. AddShoppers na-abawanye njikọ ndị ahịa site na ijikọ ọnụ